Nagu saabsan - Yueqing Aiso Electric Co., Ltd.
Alaab-qeybiyehaaga Korantada ugu Fiican
YAA KA YAHAY
AISO Electric waa shirkad xirfadle ah oo alaab-koronto dhoofisa. Alaabada la dhoofiyo waxaa ka mid ah: Qalab Qalab Qalabaysan oo Qalabaysan equipment Qalabka korontada ee korantada ku shaqeeya, qalabka korontada ku shaqeeya ee hooseeya iyo kuwa wax beddela. Waxaan haynaa 3 warshadood, dhammaan alaabooyinka waxaa lagu soo saaraa si adag iyadoo la raacayo heerarka ISO9001 iyo CE.
Shirkaddu waxay leedahay in ka badan 10 sano oo khibrad dhoofineed ah, waxaana lagu iibiyey in ka badan 50 dal. Badeecooyin badan ayaa la isticmaalay in ka badan 10 sano oo ay si wanaagsan u heleen macaamiisha.
Waxaan sii wadi doonnaa inaan horumarino nidaamka wax soo saarka iyo adeeg xirfadeed si aan u siino alaab iyo adeegyo wanaagsan.
1. Tayada ayaa ugu horeysa, dhaqankeena.
2. "Anaga oo lacagtaadu kujirto meel aamin ah" lacag celin buuxda haddii ay dhacdo wax xun oo aan waafaqsanayn shuruudaha farsamada ama dib u dhigista waqtiga dhalmada.
3. "Waqtigu waa dahab" adiga iyo annagaba, waxaannu leenahay koox koox xirfadlayaal ah oo ka dhigaysa mid tayo sarreysa muddada gaaban.
Waxaan leenahay khibrad aad u badan oo ku saabsan wax soo saarka iyo iibinta, waxaan ku takhasusay soo saarista qalabka korontada iyo korantada wax soo saara. baahidaada, alaabooyinka loo habeeyay Shirkadda ganacsiga ee ballaadhinaysa, macaamiisha dhammaan daaqsinka, oo leh sumcad wanaagsan si loo helo kalsoonida macaamiisha gudaha iyo dibaddaba, si kor loogu qaado casriyeynta dalkeenna, kor loogu qaado is-weydaarsiga dhaqaalaha iyo tikniyoolajiyadda adduunka dadka waddammada oo dhami waxay qabtaan shaqo badan oo wax ku ool ah. Waxaan si kal iyo laab ah u rajeyneynaa in adiga iyo 1 aad ka wada shaqeysaan sidii wax loo abuuri lahaa. Mustaqbal wanaagsan!